फातिमाको अभयारण्य | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | लिस्बो, के हेर्ने
En पोर्चुगल त्यहाँ धेरै चाखलाग्दो र सुन्दर गन्तव्यहरू छन् र हामी उनीहरूको बारेमा यहाँ कुरा गर्दैछौं वास्तविक अलिडाड भियाजहरूमा। आज उसको पालो हो फातिमाको अभयारण्य, एक सुपर लोकप्रिय तीर्थयात्रा स्थल जुन एक वर्षमा million० लाख व्यक्ति द्वारा भ्रमण गरिन्छ।
अभयारण्य हो लिस्बनबाट १२126 किलोमिटर त्यसो भए यो सजीलै बन्न सक्छ दिन यात्रा पोर्तुगाली राजधानी बाट। तसर्थ, यो सबै जानकारी लेख्नुहोस् यदि तपाईं पोर्तुगाल भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको पर्यटन आकर्षणहरू।
अभयारण्य फातिमा शहर मा छ, देशको केन्द्रमा, कोभा दा Iria भनिने एक सुन्दर क्षेत्रमा, जहाँ कन्भेन्टहरू होटल र अपार्टमेन्टहरूसँग मिलेर बस्दछन्। अभयारण्य संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो।
यो भर्जिनको उपस्थितिको पछि निर्माण गरिएको थियो। कथा १ 1917 १XNUMX मा अन्तमा तीन बच्चाहरूमा जान्छ फातिमाका तीन साना गोठालाहरूतिनीहरूले भर्जिनलाई धेरै पटक देखे र एक पटक उनीहरूलाई एक चैपल बनाउन भने। स्वाभाविक रूपमा चैपल ठूलो हुँदै गयो र हामीले अभयारण्य बन्न देख्यौं जुन हामी आज देख्छौं र यसले हजारौं तीर्थयात्रीहरूलाई स्वागत र स्वागत गर्दछ।
तर भवन जस्तो यो जटिल के हो? राम्रो बिभिन्न संलग्नताहरु छन्: प्रार्थना क्षेत्र, Apparitions को चैपल (भर्जिनको एक छवि राख्छ कि मूल एक), रोजारी को हाम्रो महिला को Basilica, रेक्टरी र Carman को हाम्रो महिला को retreats हाउस, अर्को retret घर भनिन्छ हाउ लेडी अफ अफ स्रोन्स, पोओ XII स्क्वायर, पल VI पास्टोरल सेन्टर, होली ट्रिनिटीको नयाँ बेसिलिका र पिल्ग्रिम लज।
La बेसीलिका अफ रोडी अफ लेडी यो धेरै ठूलो छ र कामहरू १ 20 २० को दशकको अन्तमा शुरू भयो। छ बारोक शैली र यो १ 1953 65 मा अभिषेक गरिएको थियो। यसको टावर height 62 मिटर उचाईमा पुग्छ र माथिल्लो भागमा काँसाको मुकुट छ जुन सात हजार किलो तौलको छ र यसले क्रस पनि बोक्छ। भित्र फातिमामा बनेको made२ घण्टा र एउटा घडी रहेको छ। टावरको अगाडि मोनोग्राम, एनएसआरएफ छ, भ्याटिकन अफिसहरूमा मोजेकमा बनेको छ।
समान कार्यालयहरूमा बनेको अर्को समान सुन्दर मोजाइक बासिलिकाको प्रवेशद्वारभन्दा माथि छ र हो पवित्र ट्रिनिटीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा। भवनको प्रवेशद्वारमा दुई ठूला मूर्तिहरू छन्, एउटा इम्माकुलेट हार्ट अफ मेरी (संयुक्त राज्यमा क्याथोलिकहरूले प्रस्ताव गरेको), र अर्को रोजारीका महान प्रेरितहरू। त्यहाँ सेन्ट जोन युडेस र सेन्ट स्टीफनको मूर्ति पनि छ।
बासिलिका एकै ठाउँमा बनेको छ जहाँ तीन साना गोठालाहरूले भने कि उनीहरूले अचम्मै बिजुली चम्काएको देखेर उनीहरू डराए र बगाल भेला गरेपछि उनीहरूलाई घर फर्कन बाध्य तुल्याए। यो .70०..5 मिटर लामो र meters 37 मिटर चौडा छ र यो चुनढुंगाले बनेको छ, धेरै, धेरै सेता।
यो एक विशिष्ट डिजाइन एक ठूलो चेनको साथ दुई नाभ, दुई sacristies र एक transept साथ। त्यहाँ १ side साइड चेपलहरू पनि छन्, सबै मार्बलमा, प्रत्येकले रोजारीको एक रहस्य प्रस्तुत गर्दछ र कांस्य बास-राहतहरू।
ट्रान्ससेटको सम्पूर्ण आर्च सँगaछ मोजेकभ्याटिकन अफिसमा बनेको छ र सिंगापुरको क्याथोलिक समुदायले प्रस्ताव गरेको छ, र छेउको पर्खालमा अर्को मोजाइक छ, १els प्यानल, जुन क्रसको स्टेसनहरू निर्माण गर्दछ। वेदी, यसको अंशको लागि, विहानको मध्यभागमा छ, ढु stone्गाले बनेको र चाँदीका टुक्राहरू जो अन्तिम भोज प्रतिनिधित्व गर्दछ।
नक्काशी गरिएको चाँदीको अर्को टुक्रा भेट हुने पाल हो। त्यहाँ एक वेदीपिस छ जुन हाम्रो महिलाको सन्देश प्रस्तुत गर्दछ, चित्रकार जोआओ डे सुसा अराजोको काम।
एक छेउको चैपलमा, ट्रान्ससेटको बाँयामा, हो धन्य जैकिन्टाको चिहान सन्‌ १ 1920 २० मा मर्यो र बहिनी लुसियाको २०० 2005 मा मृत्यु भयो। यहाँ अर्को दफन गरिएको फ्रान्सिस्को हो, १ 1919 १ in मा उनको मृत्यु भयो। अर्कोतर्फ, बासिलिकाको पछाडिपट्टि एउटा गायनको दाहिने भाग हो, जुन कामको काम हो। इटालियन कम्पनी फ्रेटेली रुफट्टी र s० को दशकको हो।यसका bodies निकायहरू छन् र २०१ absolutely मा पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भयो।
प्रभावशाली कोलोनाडे यो आर्किटेक्ट एन्टोनियो लिनोको काम हो र छ Col२ स्तम्भहरू र आधा स्तम्भहरू १ 14 वेदीहरू। यो क्रसको स्टेसन अफ क्रसको भाग हो जसमा यसको सिरेमिक प्यानलहरू छन् र यसमा १ images वटा छविहरू छन्, ठूला तीन मिटर माथि छ, जसमध्ये केही सन्तहरू छन् जो "मारियन प्रेषितहरू" हुन्। त्यहाँ अर्को अंग छ, घेरामा, जुन फर्म Yves Koenig द्वारा निर्माण गरिएको थियो, यसको २० रेजिष्टरहरूको लागि ठूलो शक्ति धन्यवाद सहित।
El प्रार्थना क्षेत्र यो पनि ठूलो र चौंकाउने: यो एक हो रूखहरू र दुई बेसिलिकाले घेरिएको धेरै फराकिलो एस्प्लानेड। सम्मेलनहरू भएको बखत मानिसहरू त्यहाँ भेला हुन्छन्। रूखहरुको कुरा गर्दा, एक सय वर्ष पुरानो होल्म ओक जुन apparitions संग जोडिएको छ र त्यसैले यो «सार्वजनिक चासो of को उपाधि प्राप्त गरेको छ। अर्कोतर्फ पनि छ येशूको पवित्र हृदयको स्मारक, यसको आदिम फव्वाराको साथ, गिल्ट कांस्य र अज्ञात लेखकले बनेको छ।
१ 1999 2000। मा, होसे अरिलियोले बनाएको डुँडको उद्घाटन वर्ष २००० को जयंतीको अवसरमा स्टेनलेस स्टीलको पानामा त्रिकोण जस्तो आकारको र आधार र। मिटर उचाईको उद्घाटन गरिएको थियो। पवित्रस्थानको अर्को प्रमुख कुनामा हो बर्लिन पर्खाल यो १ 1994 60 from को हो। यो जर्मन राजधानीको प्रसिद्ध पर्खालको अवरोध हो जुन 89० को दशकको हो र १ '। In मा ध्वस्त पारिएको थियो। यो देशको एक पोर्तुगाली निवासी द्वारा प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसको अंशको लागि, अन्य बेसिलिका, होली ट्रिनिटीको बासिलिका धेरै नयाँ छ किनकि यो २०० dedicated मा समर्पित थियोयद्यपि यो विचार १ 70 s० को दशकमा पैदा भएको थियो जब यो स्पष्ट हुँदै गइरहेको थियो कि ती सबै तीर्थयात्रीहरुलाई समायोजित गर्ने क्षमता छैन। यो गोलो छ, व्यास १२ meters मिटर छ र a० मिटरको खाली ठाउँ छ। १ 125 मिटर उचाईमा यसको ,,80 सिट छ र यसको आन्तरिक दुई मिटर अग्लो चल भित्ताद्वारा विभाजन गर्न सकिन्छ।
उसको वरिपरि छन् जोन पॉल द्वितीय र पियस XII र उच्च क्रसको वर्ग Meters 34 मिटर र स्टीलको बनेको। सत्य यो हो कि फतिमाको अभयारण्य एक विशाल साइट हो त्यसैले तिनीहरूलाई ई theकवेलमा छोड्नु हुँदैन त्यहाँ पनि छन् धन्यको बलिदानको चैपल, मेलमिलाप, येशूको मृत्यु र येशूको पुनरुत्थान.
फातिमाको अभयारण्यको व्यावहारिक जानकारी:
ठेगाना: अनुच्छेद ,१, फातिमा।
कसरी पुग्ने: कार द्वारा यो सजिलो र छिटो छ तर यात्राको लागि साइन अप गर्न सुझाव दिइन्छ किनकि त्यहाँ अन्य गन्तव्यहरू छन् जस्तै Batalha को मध्यकालीन मठ र andbidos को गाउँ पनि मध्ययुगीन। यदि भ्रमणले तपाईंलाई अपील गर्दैन भने, तपाईं जहिले पनि सेते रियोस स्टेशनमा बस समात्न सक्नुहुन्छ, निलो मेट्रो लाइन त्यहाँ एक रोकिन्छ। बसहरू हरेक आधा घण्टा, हरेक दिन र प्रत्येक यात्रा को बारे मा १२ यूरो गणना।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लिस्बो » फातिमाको अभयारण्य
एक जोडी को रूप मा एक सप्ताहन्त को लागी योजनाहरु